Oldphotosofnepal | Photo you never seen before
टुँडिखेलमा रेलका डिब्बामा बनेको प्यारापिट
काठमाडौंकाे टुँडिखेल पश्चिमतिर राखिएको यो रेलको डिब्बा वि.सं. २०२५ सालसम्म देख्नेहरू धेरै नै पाइन्छन् । पछिल्लोपटक देख्नेहरूले यस भाँडोलाई शाैचालयको रूपमा पनि देखे होलान् । सार्वजनिक शाैचालयको अभाव भएको काठमाडौंमा यसलाई धेरैले शाैचालय नै बनाइदिएका थिए । त्यसपछि बालाजु उद्यानमा लगेर मिल्काइयो । र, त्यहीँ नै यसको अस्तित्व पनि हरायो ।
रेलको डिब्बा टुँडिखेलको पश
‘उहिले चोर पत्ता लगाउन जुन देवीको कसम खुवाउँथ्यौं, अहिले चोरी भयो उनैको मूर्ति’
प्राणनाथ महर्जन ललितपुर महानगरपालिका-२७ सुनाकोठीका स्थानीय बासिन्दा हुन्।
सुनाकोठीको बालकुमारी मन्दिर नजिकै प्राणनाथको घर छ। सो मन्दिरको व्यवस्थापन बालकुमारी गुठीले गर्छ। गुठीमा ६०० बढी गुठीयार छन्। प्राणनाथ पनि एक गुठियार हुन्।
गुठीले मन्दिरको हेरचाह र पूजाआजा गर्ने जिम्मा आफ्ना स
वि.संं १९९० साल माघ २ गते प्रलयकारी भूकम्प गएको ४ वर्ष पछि श्री ३ महाराज जुद्धशमशेरले राष्ट्रको नाममा लामो सम्बोधन गरेका थिए । टुँडिखेलस्थित खरीको बोटमा उभिएर उनले गरेको सम्बोधनको विवरणः भाइ भारदार प्रजावर्ग, ९० सालको भयानक भूकम्पले हाम्रो प्यारो जन्मभूमि नेपालमा ठूलो उत्पात गरेको साढे चार वर्ष भयो। त्यो उत्पातमा असंख्य धन र जनसमेत धेरै नाश हुन गई के ठूला, के साना प्रायः सबैलाई ठूलो आपत् आइपरेको थ
१९९० काे भूकम्पपछि सहयाेग गर्न खाेज्नेहरुलाई धन्यवाद दिइयो तर सहयाेग लिइएन...
पूर्वी नेपाल केन्द्रबिन्दु बनाई १९९० साल माघ २ गते गएको प्रलयकारी भूकम्पको खबर थाहा हुनासाथ विदेशबाट नेपाल सरकारमा सहानुभुतिको वर्षा हुन थाल्यो । धेरै संघसंस्था तथा मुलुकले "सहायता दरकार परे समर्पण गर्दर्छाै" भनि तार पठाए तर सबैलाई धन्यवाद र कृतज्ञता जनाई जवाफ गयो ।
काठमाडौंमा त्यसबेला पनि दुईवटा थिए धरहरा
तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको पालासम्म काठमाडौँमा दुईवटा धरहरा थिए । एउटा भीमसेन थापाकै दरबारभित्र र अर्काे काठमाडौँ सहर प्रवेश गर्ने गल्छेडोको सामुन्ने । दिल्ली (भारत)को कुतुब मिनारको नक्कल गर्दै धरहरा बनाउन लगाएका थिए भनिन्छ । सुरुमा बाघदरबार (अचेल बागदरबार भन्ने गरिएको) परिसरमा नै बनाउन लगाएका थिए । अचेल जेल भएको ठाउँ आसपासमा थियो त्यो धरहरा । भीमसेनले निर्माण गर्न लगाएकाले नै भीमसेन स्तम्भ भन्न थालियो । लगत्तै सहर पस्ने गल्ली ब
साथीहरूले सोधे ‘जहाज उड्दा भुईंमा त कति ठूलो आवाज आउँछ, जहाजभित्र तिमेरुका कान फुटेनन् ?’
वि.सं. २०१० सालतिर हवाईजहाज दुर्लभ थियो । नेपाल वायुसेवा निगम स्थापना भएकै थिएन । भारतीय विमान कम्पनीले विराटनगर–काठमाडौं डेकोटा जहाज चलाउँथ्यो। संस्कृत छात्र संघको संगठन विस्तार गर्न म र साथी मणिराम पोखरेल पूर्वी नेपाल गएका थियौं।
धनकुटाको ब्यारेकमा सैनिक रहेका मेरो कान्छा मामा शिवप्रसाद ढुंगाना र विराटनगरको मोरङ हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका जागिरे माइलो मामा बल
त्यस बेला मेरो बसोबास भक्तपुरको दधिकोटमा थियो । १९९० सालको भूकम्प भोगेकाहरूलाई लागेछ, फेरि भूकम्प आयो! गाउँलेहरू साना लालाबाला च्यापेर ‘
वि.सं. २०७९ सालको क्यालेण्डरः दशैंको टीका असोज १९ गते, कुकुर तिहार र लक्ष्मीपूजा एकैदिन
समितिले तयार पारेको पात्रो अनुसार २०७९ सालको दशैंको टीका असोज १९ गते परेको छ । समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुंगेलका अनुसार भदौ २६ गतेबाट असोज ९ गतेसम्म
एउटा तक्माको कथा
झट्ट हेर्दा यो तक्मा कुनै मुस्लिम शासकका हुन कि जस्तो लाग्दछ किनकी यसमा उर्दु भाषा मात्र प्रयोग भएको छ । तर एक तर्फ भने राजा सुरेन्द्रको तस्बिर अंकित छ । जसले गर्दा नेपालसँग यस तक्माको सम्बन्ध त पक्कै छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकियो। एक हिन्दु मुलुकको हिन्दु राजाले केबल उर्दुमा लेखिएको तक्मा किन र कसलाई दियो होला भन्ने निकै रोचक कथा छ । यसमा लेखिएको उर्दुको नेपाली अनुवाद यस प्रकारको छः (समर्पित)
ग्यालरी बैठक भवन पुनर्निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय
शहरी विकास मन्त्रालयले सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठक भवनको पुनर्निर्माण गर्ने भएको छ । २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको यो भवन शहरी विकास मन्त्रालयले पुनर्निर्माण गर्ने भएको हो ।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले वि.सं. १९६५ सालमा सिंहदरबार बनाउँदा ग्यालरी बैठक भवन पनि बनाएका थिए । २००४ सालदेखि भारदारीसभा बैठक सुरु भएको र प्रजातन्त्रपछि नेपालको पहिलो संसद भवनको रुपमा